Kamiao nifatratra tamin’ny tsena etsy Anosibe: Mpianaka maty tsy tra-drano, vehivavy iray naratra mafy | NewsMada
Ankoatra ny vehivavy iray naratra mafy, maty tsy tra-drano tototry ny biriky tamin’ilay tsena notrongisin’ity kamiao iray tapaka hisatra, tetsy Anosibe, omaly, ny renim-pianakaviana iray sy ny zanany.
Hatairana ny an’ny mponina eny Anosibe Angarangarana, omaly hariva. Kamiao iray tapaka hisatra nifatratra amina toeram-pivarotana iray amoron-dalana. Vokany, ve­hivavy iray 45 taona sy ny ankizilahy 10 taona indray namoy ny ainy. Vehivavy iray hafa 46 taona koa naratra mafy. Nambaran’ny Polisim-pirenena fa nanitsy tao amin’io toeram-pivarotana akaikin’ny farmasia Volahanta io ilay kamiaobe mpitondra entana, tototry ny birikin-trano tao ireo olona miisa telo. Tonga teny an-toerana ny polisy nitondra ireo niharam-boina tao amin’ny HJRA. « Efa maty namoy ny ainy ireo mpianaka vao tonga tato aminay ka nafindra ao amin’ny tranom-paty », hoy ny fanazavan’ny mpitsabo iray. Ilay vehivavy iray kosa, mbola tazonina nanaovana fitarafana. « Nitaraina­ny marary mafy ny valahany vokatry ny tototra biriky nahazo azy. Nandeha ra ihany koa ny fivaviany », hoy ny mpitsabo. Efa mahatsiaro tena tsara kosa ilay ramatoa, saingy mbola very saina vokatry ny loza, raha ny fanazavana hatrany. Mbo­la tazonin’ny polisy hanaovana fanadihadiana kosa ny mpamily ilay kamiao. Mito­hy ny fanadihadiana.
Ankoatra izay, lehilahy 38 ihany koa, naratra mafy, omaly taorian’ny lozam-pifamoivoizana nahazo azy teny 67 ha. Voadonan’ny moto izy ka naratra mafy ny lohany. Tsy nahatsiaro tena ity farany ka nentin’ilay mpitondra moto teny ami’ny HJRA manaraka fitsaboana.
Maromaro ireo maty
Tao anatin’ny efa-bolana, nahatratra 22 isa ireo lozam-pifamoivoizana nahafatesana olona. Tatitra nataon’ny Polisim-pirenena, misahana ny lozam-pifamoivoizana, omaly, io. Nambarany fa nanomboka ny 23 marsa ka hatramin’ny 26 jolay teo, miisa 67 ireo tranga naharatrana olona. Teo ihany koa ireo lozam-pifamoivoiana miisa enina tamina fiaram-panjakana. Miisa 26 ny lozam-pifamoivoizana vokatry ny hamamoana. Niteraka fahafatesana olona roa ity sy faharatrana olona 14 ary fahasimban-javatra miisa 11 izany. Tao anatin’ireo lozam-pifamoivoizana ireo : mpamily miisa 48 naratra. Anisany ny ny mpamily fiara, ny mpitondra moto sy bisikileta. Mpandeha an-tongotra miisa 30 koa naratra. Tamin’ireo lozam-pifamoivoizana nahafatesana olona, mpamily miisa 12 namoy ny ainy. Mpandeha an-tongotra 14 maty. Tamin’ireo lozam-pifamoivoizana vokatry ny hamamoana indray, mpamily valo naratra raha mpandeha an-tongotra miisa telo naratra. Nohamafisin’ilay tatitra fa mpandeha an-tongotra efatra naratra ka namoy ny ainy ny olona roa.